Xoolo dhaqato u adkaysan waayay baada argagixisada oo dagaal qaaday - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo xoolo dhaqato dagaal saacad socday la galeen argagixisada kooxda gaalaynta ee shabaab. Xoolo dhaqatadan ayaa sheegay inay u adkaysan waayeen baada joogtada ee argagixisada.
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaano u dhexeeya Halgan iyo Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Maalin kasta waxaan u joognaa baad, waxa noo dhaanta anaga oo maalkayaga difaacna ayuu yiri Maxamed Cali oo ah xoolo dhaqato qoriga qaatey.
Argagixisads ayaa dagaalkaas ku wayday 5 haligmeyaala oo ka mid ahaa kuwo si joogta ah baada u guran jirey. Maaha markii ugu horeysay oo dadku ka gadoodaan baada joogtada ah ee dhiigmiiratada wahaabiyada Shabaab.